Warmurtiyeedka Beesha Caalamka ayaa isugu jiray bogaadin, talooyin & digniino, waxayna soo jeedisay in hanaanka doorashada lagu dhaqmo iyadoo la tixraacayo heshiiskii Sebtember 17, 2020 ee ay wada saxiixeen Hogaamiyaha Dowladda Federaalka Soomaaliya, Madaxweynayaasha Galmudug, Puntland, iyo Jubbaland. , Koonfur Galbeed & Hir-Shabeelle, iyadoo labada aqal ee baarlamaanka ay taageeren BFS.
“Beesha caalamku waxay ugu baaqeysaa daneeyayaasha siyaasadeed inay muujiyaan hoggaan iyadda oo danta shacabka loo turaayo iyo in lagu xalliyo arrimaha ku saabsan fulinta isku tanaasul sida ugu dhaqsaha badan, iyadoo loo marayo hanaan doorasho oo lagu kalsoonaan karo.” inay uu dhacdo sida ugu dhakhsaha badan Ayaa lagu bilaabay qoraalka Beesha Caalamka.
Bayaanka ayaa lagu amaanay talaabooyinka dhicisoobay iyo kuwa curdinka ah ee loo qaaday isku soo dhaweynta dhinacyada isku khilaafsan hab maamulka Doorashada , sida dadaalada Raysul Wasaaraha ee Puntland iyo Galmudug, iyo Hogaamiye Qoor-Qoor oo isku howlay isku keenida dhinacyada kala aragtiyadda duwan & Hogaamiyayaasha DFS.
“Saaxiibbadu waxay qirayaan in heshiiskii Sebtember 17 ay ansixiyeen Dowladda Federaalka, dhammaan Dowladaha xubnaha ka ah Federaalka iyo labada Aqal ee Baarlamaanka, waxaana sidoo kale soo dhoweeyay musharixiin badan oo u taagan xilka madaxweynaha.
Halka saaxiibbada Soomaaliya iyo Soomaali badan ay ka xun yihiin in hanaankan uu aad uga hooseeyo doorashooyinka la filaayey ee “qof iyo -cod”, Hadaba heshiiska Sebtember 17 waa saldhigga keliya ee la aqbali karo in loo maro doorashadda 2021-ka. Ayaa lagu yiri qoraalka Beesha Caalamka.
Dib looma furi karo heshiiskii Sebtember 17 ama abuurid nidaam kale ama isbarbar socda. Faham ballaaran oo loo dhan yahay ayaa loo baahan yahay si loo hirgeliyo [heshiiskaas] si loo hubiyo isku halaynta hawshan. Tani waa inay la socotaa ballanqaadyadii lagu heshiiyey shirkii Madasha Iskaashiga Soomaaliyeed. Saaxiibbadu waxay soo dhaweynayaan dadaallada la dedejiyey ee lagu xallinayo arrimaha sida ugu dhaqsaha badan loona soo afjaro is afgarad maalmaha soo socda, si doorashadu u bilaabato dabayaaqada bishan. ”. Waxaa ku jira qoraalka Beesha Caalamka.
Beesha Caalamka ayaa shalay warqad ka heshay Midowga Musharaxiinta Hogaamiyaha Soomaaliya ee sanadka 2021-ka, iyadoo dowladda waqtigeedu sii dhamaanayo, dhanka kalena aan la qaadin talaabooyin dhinaca doorasho, iyo xitaa aan la xalin khilaafyadda jira oo bilooyin qaatey.